Torohevitra 9 hamoronana fampisehoana PowerPoint mahomby | Martech Zone
Torohevitra 9 hamoronana fampisehoana PowerPoint mahomby
Alakamisy 17 martsa 2016 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Miomana amin'ny famelabelarana ataoko 7 herinandro eo ho eo aho izao. Na dia mpandaha-teny hafa fantatro aza dia hamerina hatrany ilay fampisehoana tsy miovaova hatrany dia toa mahomby hatrany ny lahateniko rehefa hiomana, personalize, fampiharana ary tonga lafatra ela be talohan'ny hetsika.
Ny tanjoko dia tsy ny mibaiko izay eo amin'ny efijery, ny mamolavola sary an-tsary miavaka izay mifanaraka amin'ny kabary. Mampitombo ny fahalalana sy ny fitadidy izany. Satria saika ny antsasaky ny olona no maniry ny hijery ilay mpitsabo nify toy izay hipetraka mandritra ny famelabelarana iray, dia mikendry ny hanisy hatsikana ihany koa aho!
Araka ny iray fanadihadiana Prezi vaovao, 70% amin'ireo Amerikanina miasa izay manome fampisehoana milaza fa ny fahaiza-manao fampisehoana dia manakiana ny fahombiazany amin'ny asany
Clémence Lepers dia manampy ny orinasa hanangana vala maloto sy mandoka ka handresy lahatra ny varotra bebe kokoa. Izy dia nametraka ity infographic of Torohevitra 9 momba ny fampisehoana mahomby:
Fantaro ny mpihaino anao - Iza izy ireo? Fa maninona no any izy ireo? Nahoana izy ireo no miraharaha? Inona no ilain'izy ireo sy tadiaviny?
Farito ny tanjonao - Hamarino fa izy ireo dia SMART = voafaritra, azo refesina, azo tratrarina, azo tanterahina ary maharitra fotoana.
Manamboara hafatra manintona - Ataovy tsotra, beton, azo itokisana ary mahasoa.
Mamorona drafitra - Atombohy amin'ny teny fampidirana ny antony itadiavan'ny olona, ​​hazavao ny tombony azony, tohano ny zava-misy amin'ny hafatrao, tazomy ny hafatra iray isaky ny slide, ary farano amin'ny antso-to-hetsika manokana.
Alamino ny singa slide - Mampiasà habe, endritsoratra, fifanoherana ary loko hamoronana fahatsapana.
Manangana lohahevitra - Misafidiana loko sy endritsoratra maneho ny tenanao, ny orinasanao ary ny fijoroanao. Izahay dia manandrana manisy marika ny famelabelaran-kevitra ataonay toy ny tranokalanay ka misy ny fankatoavana.
Ampiasao ny singa Visual - 40% ny olona no handray tsara ny sary ary 65% ​​hitazona tsara kokoa ny fampahalalana amin'ny sary.
Ampifandraiso haingana ny mpihaino anao - 5 Minitra no salanisan'ny sain'ny olona ary tsy hahatadidy ny antsasaky ny nolazainao ny mpihaino anao. Fahadisoana iray izay nataoko teo am-piandohana dia ny miresaka momba ny mombamomba ahy… Ankehitriny dia apetrako amin'ny MC izany ary miantoka ny filako manome ny fiantraikany sy ny fahefana ilain'izy ireo.
Mahaiza mameno - Mandinika avy hatrany aho aorian'ny lahateniko momba ny isan'ny olona maniry hiresaka amiko. Arakaraka ny maha-karatra ara-barotra no tsara kokoa ny zava-bitako! Koa satria finday ny olona, ​​dia mamporisika azy ireo handefa hafatra amiko ihany koa aho mba hisoratra anarana amin'ny taratasiko (lahatsoratra MARKETING hatramin'ny 71813).
Farany, ny orinasa nateraka avy hatrany avy amin'ny mpijery na avy amin'ny tamba-jotra niresahany taminao dia hampiseho ny fahombiazanao. Fanampiana foana koa ny fanasana anao hiverina hiresaka!
Tags: Clémence bokatorohevitra mahomby fampisehoanaSary torohaytoro-hevitra fampisehoana keynotetoro-hevitra fototrasary powerpointtorohevitra fampisehoana powerpointtorohevitra powerpointpptpopfampisehoana infographictorohevitra fanoloranafampahafantarana torohevitra infographicmanolotrapreziMiteny
Ahoana ny fandraisan'ny doka dokambarotra ny hadalan'ny volana martsa?
Scribble Live: Antontan-taratasy, alamino ary tanteraho ny paikadinao
11 Aogositra 2016 à 6:01
Ny fampiasana sary an-tsary mahomby dia azo antoka fa hahaliana ny mpihaino anao. Tandremo anefa ny tsy hampiasa azy ireny loatra! Mety ho variana izy ireo raha be loatra. Misaotra nizara ny toro-hevitra.